လေယာဉ်ပျံကိုအစဉ်ကြားခဲ့သလား ခြောက်ပေလား | Martech Zone
မိုက်ကယ်သည်သူလာရောက်သည့်အချိန်တွင်မေလတွင်ဘလော့ဂ်တွင်တင်ခဲ့သည် CMS ကုန်စည်ပြပွဲ, ထို လေယာဉ်ပျံ အဲဒီမှာပုဒ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ လေယာဉ်ပျံ? ဘာလဲ လေယာဉ်ပျံ? ငါမကြာသေးမီကတွေ့
လေယာဉ်ပျံအကြားဖြစ်ပါတယ် ထိပ်တန်း 2% ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ open source စီမံကိန်းများ၏ 200 developer များ နှင့်3ထက်ပို00 ဖြေရှင်းချက်ပံ့ပိုးပေး နိုင်ငံပေါင်း 57 အတွက်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုတက်ကြွစွာတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 2001 ကတည်းက, အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် ဘာသာစကား ၄၀ ကျော်နှင့် အကောင်းဆုံးလုံခြုံရေး track record မည်သည့်အဓိက CMS ၏။ ၎င်းသည်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော ၅၀၁ (ဂ) (၃) Plone Foundation မှပိုင်ဆိုင်ပြီးအဓိကလည်ပတ်မှုစနစ်အားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
Plone သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်သောအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏အင်္ဂါရပ်များအပြင်အခြားထူးခြားချက်အချို့လည်းရှိသည်။
ကြီးမားသောအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု - Plone အကောင်အထည်ဖော်မှုသည်သိန်းနှင့်ချီသောစာမျက်နှာများရှိခြင်းသည်မဆန်းပါ။ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အများစုတွင်စီမံခန့်ခွဲ။ မရနိုင်ပါ။
အကောက်ခွန်လမ်းကြောင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း - ရှုပ်ထွေးဆုံးလမ်းကြောင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအလွယ်တကူအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖောက်သည်များအတွက်, ဒီအလွန်အစွမ်းထက်သည်။
မြန်နှုန်းနှင့်ရိုးရှင်း - Plone သည်စာမျက်နှာများကို ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အလွန်မြန်သည်။ interface သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးပျမ်းမျှသုံးစွဲသူအတွက်အသုံးဝင်သည်။
ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ပရောဂျက်တွေလိုပဲ Plone ဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်မယုံနိုင်လောက်အောင် developer များနှင့် add-on များအတွက် downloads များမရှိပါ။ နီးပြီ ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော် blogging, mapping, workflows, media streaming နှင့် social tools စသည့်သင်၏တပ်ဆင်မှု၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုတိုးချဲ့ရန် online repository တွင်ရနိုင်သည်။
ငါဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုရေးသားစဉ်အင်ဒီယာနာဆက်သွယ်မှုအချို့ရှိပုံရသည်။ လေယာဉ်သည်မတူပါ။ Calvin Hendryx-Parker သည်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည် Plone ဖောင်ဒေးရှင်း နှင့်ဒီမှာ Fortville, Indiana ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Calvin ၏ဇနီး Gabrielle Hendryx-Parker သည်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် Six Feet Up ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအင်ဒီယားနားရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Gabrielle သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ EM Lyon မှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ MBA ဘွဲ့ကိုလည်းရရှိထားသည်။
ကျွန်တော်လည်ပတ်ခဲ့တယ် ခြောက်ပေ ပြီးခဲ့သည့်လကနှင့်အထင်ကြီးခဲ့သည်။ Fortville မြို့လယ်ရှိသူတို့၏ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောရုံးခန်းသည်အံ့သြစရာကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏အဓိကတပ်ဆင်မှုများနှင့်အတူပူးတွဲပါ ၀ င်ရန်ကိုယ်ပိုင်အသေးစားဒေတာစင်တာတွင်မိတ္တူကူးထားသည့်မီးစက်များနှင့်ဖိုင်တပ်ဆင်ခြင်းများရှိသည် Lifeline ဒေတာစင်တာများ။ ၎င်းတို့သည် hosting, custom development, integration service များနှင့်ဘဝသိပ္ပံ၊ အဆင့်မြင့်လေ့လာရေးနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများရှိကုမ္ပဏီများအတွက် Plone installation များကိုတည်ဆောက်သည်။
Six Feet Up သည်မကြာသေးမီကပင် Plone / Zope အတွက်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည့် SolrIndex 1.0 ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး၊ SolrApache Lucene ပရောဂျက်မှလူသိများထင်ရှားသောအရင်းအမြစ်ရှာဖွေမှုပလက်ဖောင်း။ SolrIndex တွင်မြန်ဆန်။ အရွယ်အစားကြီးမားသည့်ရှာဖွေနိုင်သောစွမ်းရည်များပါရှိသည်။ SolrIndex ကိုဒီဇိုင်းဖြင့်ချဲ့နိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အခြားအညွှန်းများနှင့်ကတ်တလောက်များနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဤသည်သည် repositories များစွာတွင်ရှာဖွေနိုင်သည့်စွမ်းရည်များပေးရန်လိုအပ်သော site များအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။
Six Feet Up တွင် ၀ န်ထမ်းအယောက် ၂၀ ကျော်ရှိပြီးစတင်သည့် အချိန်မှစ၍ နှစ်စဉ်ဂဏန်းနှစ်လုံးတိုးတက်မှုအဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၄ ​​င်းတို့၏ဖောက်သည်များကိုထောက်ပံ့ပေးသောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်သည် Six Feet Up သည် Plone Tune-Up Day ကိုစီမံသည်။ ၎င်းသည် Plone အသိုင်းအဝိုင်းကိုကူညီရန်လစဉ်တစ်နေကုန်၊ virtual event တစ်ခုဖြစ်သည်။
Tags: ဘလော့ဂ်CMSအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုကြီးမားသော CMSမြေပုံမီဒီယာ streamingလေခြောက်ပေအထိWorkflows
လူမှုမီဒီယာ PR တွင်အရေးအပါဆုံးနည်းဥပဒေ